Xog: Sababtii Sida Lama Filaanka Ah Ay Barcelona Uga Hartay Baacsiga Bellerin Oo La Ogaaday FIFA Ayaa Sabab U Ahayd – Kooxda.com
Home 2017 July Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta Xog: Sababtii Sida Lama Filaanka Ah Ay Barcelona Uga Hartay Baacsiga Bellerin Oo La Ogaaday FIFA Ayaa Sabab U Ahayd
Xog: Sababtii Sida Lama Filaanka Ah Ay Barcelona Uga Hartay Baacsiga Bellerin Oo La Ogaaday FIFA Ayaa Sabab U Ahayd
Wargayska Ka Soo Baxa dalka Spain ee Sports oo ku dhow kooxda Barcelona ayaa shaaca ka qaaday sababtii ka dambaysay in ay kooxda Barcelona si lama filaan ah uga harto baacsigii ay ugu jirtay saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Arsenal ee Hector Bellerin.
Barcelona ayaa si lama filaan ah uga hartay baacsigii ay ugu jirtay xiddiga reer Spain ee Hector Bellerin iyada oo la soo wareegtay xiddiga reer Portugal ee Nelson Semedo.
Sports ayaa shaaca ka qaaday in ay kooxda Barcelona Bellerin ku qancisay in uu ku soo laabto kooxda Barcelona oo kaliya heshiiska ka dhimanayd in ay labada kooxood ka heshiiyaan qiimaha uu xiddigan ugu soo biirayo kooxda Barcelona.
Kooxda Barcelona ayaa dalabkii ugu horeeyay miiska u saartay kooxda Arsenal laakiin Gunners ayaa si deg-deg ah u diiday in ay xiddigooda ka iibiso kooxda Barcelon.
Barcelona ayaa dhinaca xiddiga ka soo martay iyada oo u sheegtay in uu kooxda Arsenal ku riixo in ay kooxdu Aqabasho dalabka Barcelona.
Bellerin ayaa aqbalay kooxda Barcelona waxana uu kooxda Arsenal u sheegay in uu doonayo in uu ku biiro kooxda Barcelona inta lagu guda jiro xagaagan maadama uu doonaya in uu xilli ciyaareedka dambe ka ciyaaro champions league.
Laakiin Tababare Arsene Wenger ayaa xiddigan si toos ah ula xiriiray una sheegay in aanu meelna uga socon kooxda Arsenal xagaagan.
Wargayska ayaa sheegaya in ay kooxda Arsenal qoraal u dirtay maamulka kooxda Barcelona iyaga oo ugu hanjabay in ay dacwada ka gudbin doonaan FIFA hadii ay ka hari weydo xiddiga Reer Spain.
Arintaas ayaa keentay in agaasimaha kooxda Barcelona isla maalmo kadib u duulo Benfica si uu u soo afjaro saxiixa xiddiga reer Portugal ee Nelson Semedo oo ay kula soo wareegeen lacag dhan 30.5 Milyan euro.